Ubunqunu bezobugcisa bukaPeter Coulson | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UPeter Coulson wazalwa ngo-1961 kwaye uhlala eMelbourne (Australia), UPeter coulson Yiyo umfoti y umvelisi Ezizodwa kwi ukuhlela ifoto, de fashini, Imifanekiso y Ubuhle. Ngokwamazwi akhe "Iifoto zam zirhabaxa, ziyanelisa, ziyamangalisa, ziyabukeka kwaye ngamanye amaxesha zinoburharha". Uya kuyithanda igalari yezithombe esikuzisele yona, kunjalo Abafazi abahle Kwaye italente kaPeter iyaphatheka ngamehlo.
UPeter coulson Ungumfoti ohlonitshwayo, kwaye umsebenzi wakhe upapashiwe kwiimagazini ezininzi zamanye amazwe, kwaye waziwa njengamabhaso abalulekileyo anje ngala 'ICanon AIPP Umfoti weFashoni wase-Australia woNyaka'. Ungabona ezinye iifoto ze UPeter coulson kwiwebhusayithi yakhe esiyibeka ekupheleni kwenqaku.
Njengoko ebhengeza ukuba unobuhle, ifashoni kunye nokufota komntwana, kunye nemfundo 'yokufota'.
Ukuxuba uluhlu lweendlela kunye nokudibanisa iifashoni zangoku kunye nembonakalo yam yengqondo. Imifanekiso yam yomelele, inkanuko yesini, kwaye inobuhle obumangalisayo ngendlela ebonisa uburharha bam.
Fuente [UPeter coulson]
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ubunqunu bobugcisa bukaPeter Coulson